Igbo - 01. Conversation - Booklet 2: Ọ bụghị Muslim ọ bụla kwere ma chee echiche Otu ihe | Grace and Truth
Home -- Igbo -- 01. Conversation -- 2 Muslims Differ
2 - Ọ BỤGHỊ MUSLIM Ọ BỤLA KWERE MA CHEE ECHICHE OTU IHE!
N'ịgbakwuru ndị Alakụba, ọ bara uru ịmara na ndị Alakụba nwere ike ịdị iche na ibe ha. Ntụle nke ụdị ndị Alakụba dị mkpa ị ga-ezute na-enyere gị aka ịdị njikere ịgakwuru onye kwesịrị ekwesị n'oge kwesịrị ekwesị.
2.02 -- Ihe ndị mere eme na ihe ndị mere eme
2.03 -- Ndị Juu na Ndị Kraịst n'oge ochie tupu Muhammad
2.04 -- Muhammad na "ndị mmadụ n'akwụkwọ"
2.05 -- Mmetụta nke Chọọchị Ọtọdọks na e guzobe Islam
2.06 -- Muhammad na ọdịiche dị n'etiti ndị Juu na ndị Kraịst
2.07 -- Chọọchị Ọtọdọks - ogologo nhụjuanya dị ogologo
2.08 -- Islam na Chọọchị Roman Katọlik
2.09 -- Islam na Chọọchị Protestant
2.10 -- Nkewa nke ụka na nkewa nke Islam
2.11 -- Ndị Sunnite - iyi isi na Islam
2.12 -- Ndị Shiites - nke mbụ okpukpe Islam
2.13 -- Ihe nke atọ nke Islamization
2.14 -- Kedu ụdị ndị Alakụba anyị na-ezute?
2.14.1 -- Ndị Alakụba na-atụ egwu Chineke na ndị na-atụ egwu Chineke
2.14.2 -- Ala ndị Alakụba
2.14.3 -- Ụmụ nwanyị Muslim
2.14.4 -- Ndị ntorobịa Muslim
2.14.5 -- Ndị Alakụba nwere nkụda mmụọ
2.14.6 -- Ndị na-ekweghị na Chineke dị n'etiti ndị Alakụba
2.14.7 -- Omimi nke Islam
2.14.8 -- Ndị Mgbapụta na Islam
2.15 -- Iji mee ogologo akụkọ dị mkpirikpi
2.16 -- Nnyocha
2.01 -- Ọ bụghị Muslim ọ bụla kwere ma chee echiche Otu ihe!
Onye ọ bụla chọrọ ịghọta echiche ndị Muslim kwesịrị ịma banyere akụkọ ihe mere eme na ihe ndị Juu na-eme na chọọchị ndị Kraịst dị na Arabian Peninsula na mba Mediterenian. Islam esiteghị na -acha anụnụ anụnụ, kama ọ na-esi na ndị na-aga n'ihu, ndị Juu na ndị Kraịst, na-emekọrịta ihe.
Ndị Juu gbasasịrị n'akụkụ niile site n'aka ndị agha Rom nọ na Siria dị ukwuu ma ọ bụ ree ha n'ohu mgbe ha kwụsịrị nnupụisi ha (70 A.D 132/135 A.D.). Ndị ọchịchị Juu malitere na Asia Minor, na Iraq, na Arabian Peninsula, na Egypt na Rom n'onwe ya.
N'agha ndị agha na-aga n'ihu n'etiti mba ndị dị na Mediterenian na ndị agha na-esi n'Eshia, ndị Juu bi n'ebe ọwụwa anyanwụ nke ọzara Siria na-alụ agha n'akụkụ n'akụkụ Sassanids megide ndị Rom. Site n'enyemaka nke ndị enyi ha ha guzobere alaeze ndị Juu na ndịda Yemen, ebe ebe myrrh na ndị na-eto eto na-etolite, dịka ihe nchebe megide mmetụta ndị Kraịst nke alaeze Byzantine.
Mgbe ndị Rom merisịrị mmegha nke ndị Juu na Jerusalem na Damaskọs, chọọchị ndị Kraịst nọ na obodo ndị dị na Alexandria, Antiọk, Efesọs, Rom, Edessa na Constantinople. Ha kwusara Mesopotemia, Ethiopia, North Africa na Central Asia. Ndị Copts Etiopia malitere ịkwusa ozi ọma n'ebe ugwu Yemen ma wuo alaeze ndị Kraịst ruo ọtụtụ afọ site na episco-pate na Wadi Nadjran. Agha dị iche iche dara n'etiti alaeze ndị Juu nke dị n'ebe ndịda Yemen na alaeze Copt nke dị n'ebe ugwu Yemen. A na-erekwa ndị ohu Kraist si Syria na Hedjaz. Otu ụlọ na Mecca zukọtara gburugburu Waraqa b. Nawfal. N'ihe dị ka oge a, bishọp nke obodo Sohat, na Sultanate nke Oman taa, bụ onye so na Council nke Nicea.
Ndị Juu na Ndị Kraịst masịrị Muhammad (575-632 AD) n'ihi na ha nwere akwụkwọ nke kpugheere ha ihe nzuzo nke oge gara aga, laghachi azụ, wee nye iwu ka ndụ ha dị ugbu a site n'iwu ma nye ha ọdịnihu n'ọdịnihu na Ụbọchị nke Ikpe. Muhammad kwadoro ndị Juu na Ndị Kraịst ma kpọọ ha "Ndị nke Akwụkwọ". O choro inweta akwukwo dika nke ha n'asusu n'asusu Arabic. O gbaliri ichota ihe omuma nke akwukwo nso dika o si mee ka o nwee olileanya ichota okpukpe nke aka ya.
Muhammad, onye Bedouin, masịrị Ebreham, onye Bedouin, nwere mmasị n'ebe Muhammad nọ, bụ onye dị njikere inye nwa ọ mụrụ nanị ya ka ọ bụrụ àjà nye Allah (Sura al-Saffat 37: 99-113). N'ihi nke a, kor'an na-akpọ Abraham - ya bụ onye mbụ Muslim (Sura Al 'Imran 3:67).
Mozis, onye isi ochichi na onye ogbugbo n'agbata Allah na ndi ya nke ogbugba ndu, bu ihe ruru ugboro 136 na kor'an. Ọ bụ ihe nlereanya na-eduzi maka Muhammad na ndị na-eso ụzọ ya n'ihi na ọ dị n'otu okwukwe na ike, okpukpe na ala na ya.
Akụkọ banyere nna nke okwukwe na Solomon na iwu dị iche iche nke sitere n'Iwu Mozis mejupụtara ugboro 10 dị ka ọtụtụ amaokwu dị na kor'an dịka akụkọ banyere nwa dị nwayọ nke Mary, onye ọrụ ebube na ndị na-eso ụzọ ya. Onye ọ bụla nke gụrụ kor'an nwere ike ịmalite ma ọ bụ mgbe e mesịrị mara na ọ na-achọ Islam dị ka òtù ndị Juu, nke ndị Alakụba na-agọnahụ siri ike.
Chọọchị Ọtọdọks nwere mmetụta siri ike karịa Islam karịa Chọọchị Roman Katọlik. Ot'odi, ndi Kristain nke Orthodox ekwuputaghi ozizi zuru oke banyere Kraist nye Muhammad. Mgbe ndị Copts kwusiri ike na Chineke dịka ụlọ akwụkwọ ha dị na Aleksandria, Ndị Kraịst bụ ndị gbasoro akwụkwọ Antiochene lekwasịrị anya na ọdịdị mmadụ nke Kraịst.
E nwere ike ịchọta ihe ndị a na-efe ofufe n'Islam na ọrụ ndị Ọtọdọks nke ndị kwere ekwe na-akpọrọ isi n'ime izu tupu Ista ka ha sọpụrụ Atọ n'Ime Otu. Okwu qir'an na Chọọchị Ọtọdọks na-asụ Arabic na-apụta: ịgụta ozioma n'oge oke nsọ. Okwu a bu ihe kpatara okwu nke kor'an ma obughi nke ozo. N'asụsụ Asiria, okwu maka nzọpụta bụ furqan, nke na-egosi na kor'an ugboro ugboro dịka ozi ziri ezi.
Muhammad maara banyere esemokwu na esemokwu dị ọkụ n'etiti ndị Juu na ndị Kraịst (Sura al-Baqara 2: 113 na nke a). E nwere agha siri ike n'etiti mba ndị Juu na nke Ndị Kraịst na ndịda na n'ebe ugwu Yemen ruo ọtụtụ narị afọ nke n'akụkụ nke ọ bụla na-akpagbu ndị meriri mgbe ha merisịrị agha. Muhammad ghọtara nkewa a dị ka mkpebi Chineke, onye kpaliri ndị na-alụ ọgụ megide ibe ha na Hedjaz, nke mere na Islam nwere ike gbasaa nke ọma n'etiti ndị iro a, ndị agha ha dara mbà. Muhammad pụtara dị ka onye na-ahụ ọchị n'etiti ndị ọzọ, ma emesia o meriri ha nile.
Ndi Juu juru Muhammad dika onye amuma, ha weghaputa ihe ndi o mehiere na kor'an ma kwaa ya ebubo n'ihu ọha. Ntre enye ama ọbọrọ ha ugboro iri (Sura al-Baqara 2: 65-66, Al-Ma'ida 5:60, Al-Araf 7: 163-166). Ọ kpọrọ ha ndị iro kachasị egwu nke Islam (Sura al-Ma'ida 5:82). Ọ kpaliri agbụrụ ndị Juu bara ọgaranya ịkwaga na mgbe oge ruru, ọ nabatara ha ma ọ bụ kpochapụ ha na mma agha.
Ná mmalite, a na-ewere Ndị Kraịst nọ na Peninsula nke Arab ka ha bụrụ ndị enyi n'etiti ndị na-enwụrụ ndị Alakụba (Sura al-Ma'ida 5:82). Ma mgbe ha nọgidere na-ekwupụta na Jizọs bụ Ọkpara Chineke, a kọchara ha dị ka ndị Juu (Sura al-Tawba 9:29). Afọ ole na ole ka nke a gasịrị, Caliph Omar Ibn al-Kattab kpụpụtara ha site n'ógbè Arab Peninsula.
Na mgbasa ozi mmeri (632-732 A.D.) Ndị agha Muslim meriri ebe nile dị mkpa nke Iso Ụzọ Kraịst oge mbụ: Jerusa, Alexandria na Antiọk. Ndị Consostopleople na Efesọs na-esote ha na nke abụọ nke okpukpu Islam. Ọtụtụ Ndị Kraịst nọ n'Ebe Ọdịda Anyanwụ echefuwo, eleghara anya ma ọ bụ jiri obi ha nakwere ọdachi a kachasị njọ na chọọchị ya.
A na-anwale Chọọchị Ọtọdọks site nhụjuanya. Ha na-akwado, na-akpagbu ma na-eme ka ọ bụrụ na Islam kwusiri ike ruo afọ 1,370. N'oge oge Muhammad, ọtụtụ ndị bi n'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ na ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke Oké Osimiri Mediterenian bụ Ndị Kraịst Ọtọdọks, ma Islam tinyekọrọ pasent 90 nke ha site na ụtụ isi na-abaghị uru, na-eme ka ndị mmadụ ghara ịda mbà ma na-eweda ha ala, na-eme ka ha ghọọ ndị Alakụba. Naanị pasent 10 fọdụrụnụ nọgidere na-ekwesị ntụkwasị obi nye Jizọs n'agbanyeghị na a na-ewere ụmụ amaala nke abụọ! Ndị Alakụba na-ejikarị ndị obere nrubeisi a eme ihe dị ka ndị ọchịchị. Ha abughi ezigbo ihe egwu ma obu ihe ize ndu nye Islam. Site na omume ha, ndị Alakụba weere Ndị Kraịst ka ha dị umeala n'obi na ndị dị umeala n'obi, ndị a pụrụ imeri n'ụzọ dị mfe.
Ofufe dị ike nke Atọ n'Ime Otu dị na Chọọchị Ọtọdọks na usoro nlekọta ya nyere ya aka ịlanarị. N'ala ndị na-abụghị nke Alakụba, ha na-esonyere ndị ọchịchị mgbe nile, ma n'ịdị umeala n'obi ha dọrọ ha ugboro ugboro gaa n'òtù okpukpe (Byzantium, Russia, Gris, Serbia na ndị ọzọ). Ndị Alakụba nọ na mba ha na-amanye ndị bishọp Chọọchị Ọtọdọks na ndị nna ochie ka ha chịkọta ụtụ isi n'aka ndị Kraịst ha maka ndị ọchịchị Alakụba. Na-akwụ ụgwọ na ha bụ ndị isi ike na-achịkwa na chọọchị ụka ha. Chọọchị Ọtọdọks fọdụrụnụ na ndị otu narị nde mmadụ abụọ na iri ise taa nwere pasent 14 nke Ndị Kraịst n'ụwa.
Chọọchị Roman Katọlik, n'agbanyeghị na ọ dịgasị iche iche, ọtụtụ ndị Alakụba na-ewere na ha bụ chọọchị na-alụ ọgụ. O yiri ha ka ha bụ ọchịchị ụwa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-achị ọbụna mgbe ọdịda anyanwụ Rom dị n'ebe ọdịda anyanwụ na ọgba aghara nke nrụgide-mgbanwe na Europe gasịrị.
Ndị agha nke Katọlik Charles Martell kpaliri ịwakpo ndị Alakụba na Tours, dị nso Paris, France (A.D. 732). Ndị Agha Ntụte Katọlik mebiri ka Chọọchị Ọtọdọks merie Constantinople (AD 1204) ruo n'ókè nke mgbagha ndị a nke ndị Alakụba nke dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Ụwa megide ndị Alakụba na 1453. N'oge na-adịghị anya mgbe e mesịrị-ngalaba na 1529, ndị Turks guzoro na ọnụ ụzọ ámá Vienna nke mbụ. Mgbe ha nọchibidoro Vienna nke ugboro abụọ na 1683 nanị ndị agha Poland na Katọlik nwere ike ịkwụsị ọganihu nke ndị Alakụba bụ ndị zubere ịbanye na Europe nile.
Ka ọ dị ugbu a, nchọpụta nke Roman chụpụrụ ọtụtụ puku ndị Juu na ndị Alakụba si Spain na Europe. Chọọchị Roman Katọlik na nchịkọta ha na-eme ka ndị Kraịst banye n'ihe ize ndụ dị egwu n'ime ihe mgbagha ndị Alakụba. Okpukpe ndị Alakụba nke obodo okpukpe nọ na-enwe onye iro na-emegide ndị Katọlik, bụ nke na-etinye ókè na mgbasawanye ha.
Ebe ọ bụ na ndị Alakụba na-ekwu na ọrụ ozi ala ọzọ nile nke Ndị Kraịst bụ iji mee ka ndị Kraịst kwuo. Ha na-atụkwasịghị mgbalị ndị Chọọchị Katọlik na-agbakwụnye ebe ọ bụ na Kọmitii Vatican nke abụọ kpebiri imeghe Chọọchị Katọlik maka ezi ihe sitere n'okpukpe nile nke ụwa. Ihe odide nke Pope John Paul II maka nkwado zuru ụwa ọnụ bụ n'etiti ndị Alakụba na Ndị Kraịst na-ezute na enweghị obi abụọ n'ihi na ndị Alakụba na-ekwenye na Chọọchị Katọlik na nzuzo na-eguzobe Alaeze nke Kraịst n'ụwa. Otú ọ dị, ikike nke ndị poopu anọgidewo na-eme ka Chọọchị Katọlik dị n'otu n'ịdị n'otu n'okpuru ụkpụrụ bụ: "Alaeze gị bịa, n'ụwa dị ka ọ dị n'eluigwe", na-ekpuchi ọkara nke Iso Ụzọ Kraịst nke ụwa na nde mmadụ 950.
Chọọchị Protestant bụ "ụka ndị dị oké egwu" bụ ndị gbalịrị ịgbanwe Chọọchị Katọlik. Ha choputara Nso Baibul n'enweghi omenala di ka ntọala ha, bu ndi nzoputa site n'amara nani, n'enweghi ezi oru ma tukwasi obi na Kraist dika onye ogbugbo, obugh na nne ya Meri.
Ihe ka ọtụtụ n'ime Chọọchị Protestant na Europe n'oge mbụ mgbe Ndozigharị ahụ gasịrị bụ ụka dị iche iche nke ndị ọchịchị mpaghara. Nnukwu mmeghari mgbanwe mgbe na-edozie na eziputa mere ka ndị ozi ala ọzọ dị ike na United States, Europe na Korea. Otú ọ dị, nkà mmụta Ezi uche nke onyeisi chọọchị na-enweghị isi na-achịkwa, Otú ọ dị, mere ka ọtụtụ ndị Protestant na-emesapụ aka daba ná nnwere onwe na-adịghị asọpụrụ Chineke. Nzukọ ha nke onwe ha na ihe dị ka nde 600 ndị òtù na-ekpuchi otu ụzọ n'ụzọ atọ nke Iso Ụzọ Kraịst nke ụwa.
Ndị Protestant, bụ ndị mere ka ọ pụta ìhè na narị afọ anọ na iri ise gara aga, malitere ịmalite njem zuru ụwa ọnụ na narị afọ nke 18 na 19. Ha weghaara ígwè obibi akwụkwọ mbụ n'ime East East ma bipụta nsụgharị nke Bible na ọtụtụ asụsụ ndị Alakụba. Ha mere ka o kwe omume idetu Bible, kor'an, traktị na akwụkwọ edemede. Ụlọ ọrụ ebere na ụlọ akwụkwọ Protestant gbakwunyere mgbalị ha na-ekwusa ozi ọma dabeere na okwu nke Chineke. N'ụzọ ndị na-enweghị isi, ọrụ Protestant metụrụ ndị Kraịst na-ekpe okpukpe Ọtọdọks, bụ nke mere ka ndị ụkọchukwu na-emegide ndị Protestant mgbe nile.
Ndị Alakụba lere anya na Chọọchị Protestant na-enyo enyo, n'ihi na ọtụtụ n'ime ndị òtù ha na-atụle na mba Izrel ga-abụ ndị a họpụtara nke Onyenwe anyị. Ya mere ndi ozi ala ala Protestant bu ndi nledo ma obu ndi nenye aka nke ndi agba ochie.
Ndị Alakụba nwere onwe ha nwere echiche dị iche banyere Protestants. Otu onye Islam Islam jụrụ, sị: "Gịnị mere ndị Protestant ji bụrụ ndị mbụ na ọnwa?" Ya n'onwe ya zara azịza ya ma kwuo, sị: "Anyị ndị Alakụba na-egbochi echiche anyị ma ghara inwe ike ịzụlite usoro nke oge a. Ndị Catholics na-ekwupụta mmehie ha mgbe nile ma nwee àgwà gbagọrọ agbagọ. Naanị ndị Protestant nwere mmụọ 'nweere onwe ha' ma gbaa ha ume ka ha nwalee ihe a na-apụghị ime eme. "Mgbalị niile ọ na-eme iji chegharịa echiche ya bụ n'efu. Ọbụna ịkọwa ọganihu nke ọganihu nke nkà na ụzụ agbanweghị uche ya. O nwere echiche nke onwe ya banyere ebumnobi na ihe mgbaru ọsọ na okpukpe ndị dị taa.
Ndị ụka atọ a dị iche iche kewara n'ime ọtụtụ ụka dị iche iche. Ọnụ ọgụgụ chọọchị, ndị isi ụka ma ọ bụ òtù dị iche iche nke nwere ozizi na nlekọta ha karịrị 22,000, ọnụ ọgụgụ nke na-eduga anyị ichegharị ma ọ bụrụ na anyị esonye n'ekpere nke Jizọs Kraịst: "Ka ha nile wee bụrụ otu, dịka anyị bụ otu." (Jọn 17: 21-22)
Okpukpe nke na-eme ka ọgbakọ ndị a dịrị n'otu bụ isi ihe atọ dị na Catechism: Ekpere Onyenwe Anyị, Nkwekọrịta Nicene na Iwu Iri ahụ na nkọwa ha dị ka New Testa¬ tion. Nkwupụta anyị nye Chineke, Nna, Ọkpara na Mmụọ Nsọ ka a na-ewere dịka polytheism na dịka nkwulu nke na-enweghị mgbagha nke ndị Alakụba na-ekwu. Ha anaghị anabata otu Chineke ma ọ bụ naanị Allah, onye naanị ya. Ha na-agọnahụ obegide Kraist, ntọala nke okwukwe anyị (Sura al-Nisa 4: 157). Islam gosipụtara na ọ bụ ike na-emegide ụwa nile (1 Jọn 2: 22-24; 4: 1-5). Echiche ndị dị otú ahụ bụ ndị gbanyere mkpọrọgwụ kpamkpam n'ime ndị Alakụba nile, ọ bụrụgodị na ha anaghị ekwupụta ha n'ihu ọha. Okpukpe nile nke ndị Alakụba na-abanye site na àgwà a na-emegide Kraịst.
Onye obula choputara nkewa nke nzuko di iche iche na nso nso na n'uwa dum agaghi aju ya anya na Islam adighi n'otu. Dị nnọọ ka e kewasịrị ụka dị iche iche otu puku ugboro ka Islam dị ka kaleido-akụkụ nke ndị na-egbu egbu. Mmiri ukwu abuo amalitela mgbe a malitere Islam.
Ndị Sunni na-ahụ onwe ha dị ka ndị kwesịrị ntụkwasị obi na-edebe Akwụkwọ Alakụba mbụ n'ihi na ọ bụghị nanị na ha na-eso kor'an ma na-achọpụta ụdị ndụ nke onye amụma ha (Sunna). Mgbe nkwụsị ikpeazụ nke ntinye uche nke ọgụgụ isi (nke nchịkọta Muztazi) nkwụsị ahụ malitere na-agagharị na ntụgharị. Islam ghọrọ okpukpe siri ike, nke iwu kwadoro dabeere na Shari'a. Site na kor'an, Sunna, ihe ha na-ekwu na nkwenye nke iwu ụlọ akwụkwọ ise ahụ ha malitere iwu Shari'a. Ha mepụtara iwu nke mere ka akụkụ ọ bụla nke ndụ gbanwee okpukpu karịa ụkpụrụ Islam nke okwukwe. Sunnites na-ekpuchi ihe dị ka pasent 84 nke ndị Alakụba nile, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ijeri ndị na-eso ụzọ Muhammad, ọnụ ọgụgụ yiri nke ndị Katọlik.
N'oge mmepe nke Islam, ndị na-eso Ali - nwa nwa Muhammad onye bụkwa nwanne nwanne ya na ọgọ ya - kewapụrụ site na Sunnites na ụmụ abụọ nke Ali: Hassan na Hussein. Ihe kpatara nkewa a abughi ihe nkesa banyere okwukwe kama nkwenye di iche iche nke ike ichi achi n'ala eze Islam. Ndi Shiite choro ka Ali na umua ya ghota ndi ndu Islam mgbe Muhammad nwusiri. Nke a na-egosi na Islam ghọtara onwe ya na mbụ ịbụ ala na ọ bụghị naanị okpukpe. Ndị Shiites nọgidere na-asọpụrụ Ali na ụmụ ya abụọ, ọ fọrọ nke nta ka ha na-efe ha ofufe dị ka chi na ịzụlite onwe ha nke imams - asaa maka otu otu, mmadụ iri na abụọ maka ndị ọzọ - ndị ha na-erubere n'ejighị ajụjụ. Ndị ayatollah ha na-ekwu na ha ga-enweta nrube isi sitere na imam ikpeazụ. Ndị Shiites na-ekpuchi 14 ruo 16 pasent nke ụwa Islam, na narị ndị agha 200 mil.
E wezụga ndị Shiites e nwere ọtụtụ ndị Alakụba ọzọ, ụzọ, iwu, obodo, ọgbụgba ndụ na agbụrụ ndị na-adịghị njikere ịdị n'otu, ma na-agbasi mbọ ike ka ha ghara ịhapụ onwe ha.
Mgbe ebili mmiri abụọ nke Islam gaa Europe amaala (A.D. 732 na 1683) n'ihi ụsụụ ndị agha Katọlik, nke atọ malitere na 1973 mgbe mmụba mmanụ na mberede. Mba ndị ahụ na-emepụta mmanụ na-eme ka mmanụ ghọọ ndị bara ọgaranya. Ebe ọ bụ na a ghaghị ịkwụ ụgwọ ego ha na-enweta mgbe nile maka nlọghachi nke Islam ọzọ ọtụtụ echiche nke ndị Alakụba nwere ọgụgụ isi nwere ike ịnye ego. Hassan al-Banna, bụ onye guzobere òtù ụmụnna Muslim, kwusara: "Onye Muslim nke na-ekpe ekpere, na-ebu ọnụ ma na-akwụ ụtụ isi okpukpe ya abụghịzi ezi Muslim. Naanị ma ọ bụrụ na Shari'a na-achịkwa ala ọ na-ebi na Alakụba na-abịa izu okè ya. "Ụmụnna nwanne ya Muslim gbakọtara n'ime ihe karịrị iri ise n'ime ọtụtụ mba ndị Alakụba. Ha na-agbalị igbanwe Islam na ime ka mba ndị Alakụba na-emesapụ aka na-achịkwa Shari'a.
N'otu oge ahụ, ndị Muslim fundamentalists malitere atụmatụ nke ọma iji gbasaa Islam na mpaghara ise dum. Alakụba na-agbapụ n'elu ebe niile dị ka mushrooms. Ndị Naive Ndị Kraịst na-anabata ndị Alakụba n'ime ọha mmadụ. Ha achọghị ịchọpụta na ọ dịbeghị anya ndị Alakụba bi na mba Protestant dịka taa! Anyị bi n'etiti agha nsọ ha - ma anyị amaghị!
Ndị Alakụba adịghị ebi ma ọ bụ chee echiche. Onye ọ bụla bụ onye ọ bụla. Nchịkọta niile ezughị oke ma ọ bụ ụgha. Otu ụdị Muslim adịghị adị. Ụdị nkà, ọdịnala, agụmakwụkwọ na nkwenkwe dị iche iche na-adịwanye njọ na nke ọ bụla. Ọ ga-abụ ihe ọjọọ ịkọ banyere "ndị Alakụba". Onye chọrọ ịghọta ndị Alakụba chọrọ oge. Anyị kwesịrị ịjụ onye ọ bụla ebe o si abịa, ihe ọ na-eche ma ọ bụ mmetụta na nsogbu ya. Ihe nzaghachukwu nile nwere ike imeri. Iji bụrụ ndị enyi na ndị Alakụba, anyị chọrọ nkwụsịtụ iji ghọta ha. Nke a bụkwa ezi nkozi! Ekwesiri imeghari echiche ndi echeputara n'eziokwu. Onye Ala Muslim nwere ike ịchọta ya n'egbughị oge ma ghọta na anyị na-akwanyere ya ùgwù ma ghara ịnwa iji ya mee ihe, ma nabata ya dị ka ọ dị. Oziọma ahụ nwere ike ịrụ ọrụ dị ka ike nke Chineke mgbe e wusịrị ntụkwasị obi. Ekpere mgbe niile bụ ihe nzuzo nke ngọzi na-adịgide adịgide.
N'agbanyeghi na onye obula bu onye obula bu onye obula, enwere ike ighota ihe dika edeputa - dika ihe ndi ozo, ka ayi we kwue okwu banyere ndi di iche iche nke ndi Alakụba.
Na ime obodo nakwa na mahadum, na ụlọ alakụba na ọrụ ọ bụla i nwere ike ịchọta ndị Alakụba chọrọ ibi ndụ kwekọrọ na kor'an na ọdịnala ha. Ọ bụghị nanị mmadụ ole na ole mụtarala Arabic Arabic site n'obi kpamkpam ma ọ bụ n'akụkụ ụfọdụ n'oge ha bụ nwata. Ha na-etinye "ihe nkiri nke Koran" site na nke ha na-aghọta ụwa ha. E wezụga ọdịbendị nke kor'an na iwu nke Shari'a ọ dịghị ụdị ndụ ọ bụla nwere ike ịnwụ. A na-ewere ndị ohu nke ndị òtù nzuzo, okpukpe ndị ọzọ na ndị na-ekpere arụsị dị ka ndị na-adịghị ọcha ma bụrụ ndị Allah na-akpọ. Emechibidoro ma kwe ka ihe oriri kewaa ụwa ha na ndị na-eri anụ na ndị dị ọcha. Ịzụta anụ na ahịa nke Basmallah ekwughị na igbu egbu bụ ihe dị nsọ maka ndị Alakụba na-achọghị nchebe. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ha ga-eri ya, ọ gaghị abụrụ ha iwe.
A naghị ekwe ka ndị kwadoro okpukpe ha "chee ma ọ bụ kwuo okwu nkatọ" banyere kor'an. Ọ bụrụ na ị ga - ajụ naanị otu amaokwu, ụlọ niile nke ụwa ha ga - emecha kwụsị. Ya mere, ha ga-agbachitere eziokwu nke okwukwe ha mgbe ọ bụla e nyere echiche dị iche iche. K'an'an bụ ndụ ha. Ị nwere ike ịkọwara ha ozi ọma ahụ site n'enyemaka nke okwu Kansan, ma mejupụta ha ihe Oziọma ahụ pụtara.
N'ụzọ dị ịtụnanya, ọbụna ụmụ akwụkwọ dị ọtụtụ n'etiti ndị a. Ọ bụrụ na ha esi n'obodo nta ha bịa n'obodo ndị ukwu ma hụ ndị na-emesapụ aka, ndụ mmehie, ihere ndị ha na-eme ha, ma laghachi azụ na ọdịbendị ha ma ghọọ ndị Alakụba na-anụ ọkụ n'obi karịa ka ha nọbu. Ha na-anwa ikwenye ihe kpatara ndabere nke ndu ha ma chekwaa kor'an nke zuru oke n'ah'anya.
Mgbe ndị ọkachamara dị otú ahụ dị ka ndị ọgụgụ isi, ha na-agbalị ịgbanwe ndị ha site na udo ma ọ bụ ime ihe ike. Ọ bụghị mmadụ ole na ole n'ime ndị kwere ekwe a dị njikere igbu ndị Alakụba na-emesapụ aka ma ọ bụ itinye aka na òtù ndị omempụ iji mezuo ụkpụrụ Islam na mba ha.
Ọnụ ọgụgụ ndị nkenke n'etiti ndị Alakụba dị iche site ná mba ruo ná mba. Ha ruru 15 na pasent 35. Dị ka ntuli aka ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-ekwu, ha na-enweta nanị pasent 10 ruo 20 nke nghoputa niile. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na-abaghị uru Muslim bụ ndị na-egbuke egbuke. Ma kor'an na-enye ha iwu ka ha tinye Shari'a na mba ha nke Alakụba n'agbanyeghị ihe ọ na-efu!
Dị ka a na-akpọ mba Ndị Kraịst, ihe ka n'ọnụ ọgụgụ ndị Alakụba nọ na islam esiteghi na ya, ndị dị nro na udo. Site n'ịrụsi ọrụ ike, ha na-arụ ọrụ iji nweta ego zuru ezu iji zụọ ezinụlọ ha. Ha anaghị enwe mmasị n'ọtụtụ ihe. Ha na-atụ anya ịnwe friza, nnukwu TV ma ọ bụrụ na o kwere omume, ụgbọ ala ma ọ bụ ọgba tum tum. Maka ihe ka ọtụtụ, okpukpe bụ okwu nke abụọ maọbụ ụzọ isi eme azụmahịa.
Na ndụ kwa ụbọchị, ndị Alakụba na-emesapụ aka na-eme omume asọpụrụ n'ihi na onye na-adịghị ebi ndụ dịka ọdịbendị nke Alakụba na-apụghị ịzụta ma ọ bụ ire ere ruo ogologo oge. Ọtụtụ na-eji okwu nke okwu na okwu ha, na-agbachitere ọha mmadụ n'ihu ọha maka ọdịnala ha ma kwado omenala iwu. Ọ bụrụ na naanị otu onye n'ime ndị ezinụlọ na-aghọ Onye Kraịst ọ ga-eme ọgba aghara. N'ihi ezi aha nke ezinụlọ ya, a ga-akpọ onye ahụ a tọghatara asị, kpọọ ya egwu ma ọ bụ zipụ ya na mba ọzọ. N'okpuru ihe ọ bụla, isi nke iguzosi ike n'ihe nye Islam na-eme ka aha ha doo anya. Ewezuga na ndị òtù dị otú ahụ anaghị adị na-aga n'ekpere ekpere ma ọ bụ naanị ime ya ka a hụ. Ha siri ike imeghe kor'an iji chebara ya echiche. Ụdị enweghị mmasị n'ebe okpukpe nọ dabere na ọtụtụ ndị Alakụba. Ha mejupụtara pasent 50 ruo 70 nke ndị bi na ya, dabere na mpaghara ma ọ bụ mba ebe ha bi.
Mgbe ụfọdụ nationalism na Islam nwere ike isonyere ọnụ. Mgbe ahụ, okpukpe ga-akwado mmetụta mba na ntụgharị okwu. Otú ọ dị, mgbe mba ahụ rutela na Islam, ọdịiche nke ịhụ ihe onwunwe n'anya ga-achịkwa. Ọrụ, nri na ezinụlọ adịghị anya dị mkpa karịa okpukpe.
Ndị Ala ọzọ bụ ndị Alakụba na-ekwupụta okwu ndị mmadụ na kor'an na n'ọdịnala. Ugbochi nri, iwu gbasara agha agha, Jihad, ọnọdụ nke ụmụ nwanyị na kor'an ma ọ bụ ntaramahụhụ obi ọjọọ na-eleghara anya na iwu dị otú ahụ dị mkpa maka ihe ndina na ụbọchị Muhammad. N'oge a, n'oge ọganihu, iwu ndị a abaghịzi uru. Ndị nwere onwe na-ebi ndụ dị ka onye bụ Islam na-egbuchapụ .
Ọtụtụ ndị ọchịchị Islam na-aga n'ụzọ yiri nke ahụ. Ha na-ekwe ka ndị ndú nke ụlọ alakụba na-elekọta ọrụ nke Shari'a. Ụkpụrụ nile banyere Agha Dị Nsọ ma ọ bụ ntaramahụhụ siri ike nọgidere n'aka ndị ọchịchị. Ha na-agbalị imebi iwu n'etiti ndị Shari'a na ndị ruuru mmadụ, ma na-emegide ndị fundamentalists na mba ha. Ndị na-eyi ọha egwu na Egypt ma ọ bụ Algeria abụghị ihe ọ bụla ọzọ karịa agha maka mmejuputa iwu Shari'a dum. Nke a bụ kpọmkwem ihe ndị Alakụba na-emesapụ aka na gọọmentị ha chọrọ igbochi ọ bụla ụgwọ.
Ọkara nke ndị Alakụba niile bụ ụmụ nwanyị! Anyị ekwesịghị iche naanị banyere ụmụ nwoke mgbe anyị na-ekwu maka ndị Alakụba. Ụmụ nwanyị na-arụ ọrụ dị mkpa na Islam. Ha na-emetụtakarị ụmụaka n'ime ụlọ ha karịa di ha.
Otú ọ dị, kor'an na-ede n'ụzọ doro anya, sị:
Ma nwoke adighi ka nwanyi (Sura Al 'Imran 3:36).
Ogwu a na Islam nwere usoro iwu. K'anụ na-ekwu, sị:
Ndị ikom na-eguzo n'elu ụmụ nwanyị na Allah họọrọ mmadụ karịa ibe ya nakwa na ha (ya bụ, ndị nwoke) ji ego ha (maka ịlụ ụmụ nwanyị dị ka ndị na-alụ nwanyị) (Sura al-Nisa 4:34).
N'ụlọikpe, àmà nke otu onye Alakụba na-adaba n'ihe akaebe nke ụmụ nwanyị Muslim abụọ (Sura al-Baqara 2: 282). N'ime ihe nketa, nwanyi nara ọkara nke nwoke ma ọ bụ dị ka nwa ya nwoke, nwanne nwanyị ọkara dịka nwanne ya nwoke ma ọ bụ nwa nwanyị dị ka nwata (Sura al-Nisa 4:11, 176). Nanị otu nwanyị dị oke ọnụ karịa mmadụ.
A na-ahapụ nwoke ka ọ lụọ di na nwunye anọ (Sura al-Nisa 4: 3) ma ọ bụrụ na ọ nwere ike ịhụ ha niile n'anya. Ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị ikom taa enweghị ego zuru oke iji nye ụmụ nwanyị anọ na ụmụ ha, alụmdi na nwunye nwere otu. Ndị nwunye nke otu di, mgbe ọ bụla, na-ata ahụhụ na ekworo karịa ka anyị nwere ike iche.
N'ụlọ Islam, nwoke nwere ikike "ịkụziri" nwunye ya. Ọ bụrụ na ọ nupụ isi, o nwere ike ịza ya okwu "okwu". Ọ bụrụ na ọ nọgidere na-eme isi ike, ọ ga-agọnahụ ikike ndị metụtara alụmdi na nwunye ya ma ọ bụrụ na ọ nọgide na-ekwusi ike, o nwere ikike ịkụ ya ihe ruo mgbe ọ na-edo onwe ya n'okpuru, ma a gaghị ekwe ka ọ gbajie ọkpụkpụ ya (Sura al-Nisa 4:34).
Dika kor'an (obughi na iwu Turkey, Egypt ma obu Tunisia na ndi Ala ala ndi ozo) nwoke nwere ikike ngba nwunye ya n'ihi ihe obula. Mgbe oge nchere nke ọnwa atọ ruo ọnwa anọ ọ ga-alụ ya ọzọ, gbaa ya alụkwaghịm ma lụọ ya ọzọ oge. Mgbe ọ gbara ya alụkwaghịm nke ugboro atọ, ọ ghaghị ịlụ nwoke ọzọ. Ọ bụrụ na nwoke a kwa, chụpụrụ ya di mbụ ka a ga-alụ ya ọzọ (Sura al-Baqara 2: 229-230). Ihe na-aga n'ihu na ụmụ nwanyị nọ na mba ndị Alakụba na-emetụta nke ukwuu karịa na anyị nwere ike ịtụrụ ime. Ònye nwere oku Chineke na-agwa ndị inyom Muslim okwu ma na-ewetara ha ozioma nke nnwere onwe nnwere onwe spi na ndabere nke mgbagha zuru ezu na onyinye nke Mmụọ Nsọ?
Ndị ikom bụ Ndị Kraịst ekwesịghị ịdị na-ekwu nanị banyere ụmụ nwanyị Muslim, kama ọ bụ nanị n'ihu nwunye nke aka ha. Ya mere, ndi nwanyi nke nwanyi kwesiri iwepu ozi a eleghara anya ma soro umu nwanyi na umuaka okwu banyere Kraist ma gbaa akaebe gbasara ihe ndi ha na ndi nzoputa nzoputa ha. Ndị nne Muslim bụ ndị na-azụ ụmụ ha. N'ihi nke a ka ndị inyom Muslim, karịsịa ndị nne, na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ịga n'ihu n'etiti ndị Alakụba n'oge niile. Ihe omume TV maka ndi nwanyi na akwukwo maka ndi nwanyi edere n'akwukwo edere nime Kraist bu ihe di mkpa. Otu ọgbọ gara aga, ihe ruru pasent 25 nke ụmụ nwanyị na ụmụ nwanyị Muslim nwere ike ịga akwụkwọ! Taa ọnụ ọgụgụ ụmụ agbọghọ na ụmụ nwanyị gụrụ akwụkwọ nọ n'etiti pasent 40 na pasent 70 nke ndị bi na ya. Kedu n'ime gị na-amata ohere ọhụrụ a wee jide ya na Gospul?
Ndị inyom nọ na Islam bụ mgbe ụfọdụ ka ha dị nsọ na okpukpe karịa ụmụ nwoke. Muhammad kwesiri ikwu na ya huru oku ala na pasent 90 nke ndi bi na ya bu ndi nwanyi, n'ihi na ha erubereghi di ha isi. Muham mad kwuru na ya ahụla paradaịs. Naanị pasent 10 nke ndị bi na ya bụ ndị inyom n'ihi na ọ bụ nanị mmadụ ole na ole gbara akaebe na ndị nwunye ha na-atụ egwu Chineke ma na-erube isi mgbe niile. Udi di otua n'eme ndi nwanyi ka ha debe iwu nke Ndi di karia di ha, n'olile anya inweta otu n'ime ebe ndi nwanyi no na paradais.
Ole ndị ga-emere ụmụ nwanyị Muslim amara, ha ga-anwale okwukwe n'ụzọ zuru ezu iji chọta ụzọ ha ga-esi gbochie nhụsianya ha n'ụwa a na nke ọzọ n'aha Jizọs?
Ọkara nke ndị Alakụba nile dị n'okpuru afọ 18. N'ebe Islam ic mba nke a na-anọchi anya afọ 16. Onye ọ bụla nke nwere ahụmahụ n'ọrụ ntorobịa na-ezisa ozi ọma kwesịrị ịbụ onye eziokwu a mere ka ọ ghara ịma ya! Ụmụaka, ndị na-eto eto na ndị na-eto eto chọrọ mmemme dị iche na nke ndị okenye. Ihe omuma ihe omuma a choro ichogharia na nhazigharia maka ngbasa ozi oma na obula maka ekpere.
Ndị ntorobịa n'ụwa niile hụrụ agbụrụ na ụgbọ ala. Ndị na-ejegharị na mba ndị Alakụba ga-eji ịnụ ọkụ n'obi jụọ Beckenbauer, Rummenigge na Schumacher. Becker na Graf bụkwa aha a maara nke ọma n'etiti ndị Alakụba na-eto eto.
Ndị ntorobịa nke Islam na-amụta ịgụ ma dee taa. Ha na-achọ ihe ịgụ akwụkwọ dị mma. Ha chọsiri ike inweta ihe ọmụma. Ha chọrọ ịmụta ihe niile. Ha kwenyere na sayensị ma chee na ha nwere ike imeri ụwa na akụkọ ọma. Site n'inye traktị, akwụkwọ na magazin ndị na-adabara n'uche nwata, a na-enwe ike ịmalite ịkụziri akwụkwọ akwụkwọ Bible dị na ya, bụ ebe ọtụtụ puku mmadụ ga-ewepụta n'ime obere oge.
Ọtụtụ ndị na-eto eto anaghị achọ mgbaghara mmehie. Ha echeghi banyere ncheghari ma obu okwukwe. Ha choro itinye ihe niile n'onu ha: Jisos, Paul na John di nma n'anya ha dika Marx, Lenin na Mao. Mmiri a na-agụ maka ihe ọmụma bụ ọnụ ụzọ meghere emepe site na nke anyị nwere ike inye ozioma n'enweghị ihe mgbochi siri ike. Ọtụtụ ndị na-achọ ihe ọmụma ga-emetụta ma gbanwee ịhụnanya nke Jizọs Kraịst, ịdị umeala n'obi ya, ịdị umeala n'obi na udo.
Ọnụ ọgụgụ dị elu nke ụmụ akwụkwọ sekọndrị na ụmụ akwụkwọ mahadum nwere kọmputa ma ọ bụ nweta ohere ịntanetị na tearoom ma ọ bụ n'ụlọ ndị enyi ha. Nnukwu ihe rụrụ arụ, ihe na-ekwekọghị ekwekọ n'etiti òtù ndị Alakụba na ịmalite ịkụ ụda egwu sitere na òtù dị iche iche na-agbapụta na nke a. Ma onye ọ bụla n'ime ihe omume ime mmụọ na-enye aka maka ndị na-eto eto ga-abanye ọtụtụ puku ndị nleta na ebe obibi ha ọbụna site n'ala ndị Alakụchi mechiri emechi. Ihe kachasị mkpa bụ nkọwa ntinye aka n'etiti ozioma na Islam na azịza ziri ezi na ajụjụ ndị siri ike.
Inye ezigbo egwu ndi Kristain na udi olu di iche iche bu kwa nke a. Ịgba egwú choral German ma ọ bụ abụ egwu ndị America na-adịghị amasị ndị Alakụba. N'ebe ọ bụla a na-ezisa ozioma ahụ na ụda olu na-adabaghị adaba na mpaghara mpaghara nke ụda olu ise ma ọ bụ iri na abụọ, otu ga-achọpụta na ọbụna ndị na-amaghị Akwụkwọ Nsọ malitere ịbụ abụ ọhụrụ. Nnukwu nkwanye ùgwù maka ụda na ụjọ nke onye ikpe nke ụwa ka dịbeghị anya na ụwa nke Islam, n'agbanyeghị nke oge .
Obere oge tupu ohere nke ikwusa ozi ọma n'etiti ndị Alakụba dị ukwuu dị ka taa, n'ihi na ọkara nke Islam na-amụta ịgụ, ide na iche echiche na ọtụtụ n'ime ha ji ịnụ ọkụ n'obi na-elegara ndị dike na egwuregwu na nkà na ụzụ anya. Otu nwa nwanyị Bedouin nke Hadramaut, nke bi na oke nke nnukwu desert Rub al-Khali, mgbe a jụrụ ya na ụdị ajụjụ ọ masịrị ya zara: "Abụ ABBA si Sweden."
Ebe ọ bụ na ọgbọ ndị dị ugbu a nke ndị Alakụba na-amụta iche echiche, ha na-amalite ịjụ ọdịbendị ha na okpukpe n'ụzọ ezi uche dị na ya. Uzo doro anya nke Islam adighizi ezoro ha.
Ụfọdụ ndị Alakụba na-ewe iwe jụrụ, sị: "Gịnị mere ndị agha nke 250 nde ndị Arab ji enwe ike ịkụda ndị agha nke nde Israel Israel ise n'afọ 50 gara aga? Ọ nwere ihe adịghị mma ebe a. Ihe adịghị anyị mma!"
Ndị ọzọ na-ekwu, sị: "Okwu ahụ bụ Islam nwere nkọwa pụtara ìhè. Otu n'ime ha bụ: Ime udo! Gịnịzi mere ọkara nke agha nile na ụwa anyị ji jikọta mba ndị Alakụba? Gịnị mere anyị ji atụpụ iyi ọha egwu, agha obodo-agha, ịwụfu ọbara na ọ bụghị udo ma ọ bụ nkwalite?"
Ụfọdụ na-ekwu, sị: "Mba ndị na-emepụta mmanụ na-emepụta mmanụ bụ ndị kasị baa ọgaranya n'ụwa! Ma ihe kariri iri ala Alakụba bụ ndị kasị daa ogbenye na mba niile ma daa ogbenye ịda ogbenye. Gini mere ndi bara ọgaranya Alakụba ji kwadoo ndi Alakụba ndi dara ogbenye? Ma ọ bụrụ na ha enyere obere ntakịrị, gịnị mere akụkụ nke nkwado ahụ ji agbaba n'ime ala dị elu nke gọọmentị, ebe ọ bụ na ọ dịghị ihe ọ bụla na-enye ndị ogbenye? "
A jụrụ onye ọkwọ ụgbọ mmiri India nke Sheikh dị na Saudi Arabia ma ọ ghọọla onye Alakụba na-anụ ọkụ n'obi n'oge iri afọ na otu nke ọrụ maka otu n'ime ndị nlekọta nke ebe nsọ abụọ ahụ. Onye ọkwọ ụgbọ ala Muslim na - eti mkpu: "Kwụsị! Achọghị m ịnụ ihe ọ bụla banyere Islam! Achọghị m ịnweta ihe ọ bụla ọzọ na ya. Ọ bụrụ na ị maara ihe ha na-ekwu, na-aṅụ, ma na-eme mgbe naanị ha nọ, ị gaghị ekwere m. "Mgbe a jụrụ ya ihe ọ ga-achọ inweta site na ihe ọmụma a, ọ zara, sị:" Aga m amụ ihe gbasara okwukwe na okwukwe ndị Kraịst nyochaa nke otu n'ime ha abụọ na-enye ihe ka mma maka ndụ m. M ga-eso onye ahụ. "
Onye gụsịrị akwụkwọ na Islam nke Mahadum Al-Azhar na Cairo chọrọ ka ọ sụgharịa asụsụ Ara Arabic ya n'ụzọ zuru okè ma mee ka ọ dị mma. Ọ kụziiri akwụkwọ ndị Islam na Mahadum Riad. Ihe ka n'ọnụ ọgụgụ ụmụ akwụkwọ na-emegide ya bụ n'ihi na ọ na-enye echiche nke oge a na nkuzi, na kama uwe mwụda ọcha ọ na-eyi uwe akwa ọdịda anyanwụ. Mgbe ọnọdụ ha mụbara ma ụfọdụ ụmụ akwụkwọ tụbara ya obere nkume mgbe ọ na-ekwu okwu, iwe were ya, gbapụ n'ụlọ nkwurịta okwu, gbaga n'ụlọ nkwari akụ nke ndị nkụzi dị nso n'ime ọnụ ụlọ ya, were Koran ya ma gbalịa ime ka ahụ ya ghara ịda mbà. na-agụ oké mkpọtụ nke suras. Na mberede, ọ kwụsịrị ma kwupụta mgbe e mesịrị: "Na nke ugbu a, achọpụtara m na ọ bụ akwụkwọ a nke mere ka obi gbawara ndị Alakụba ma gbochie echiche ha na omume ha." O weere kor'an ma wepụ ya n'iwe, gbara ọsọ gaa n'ogige nke ụlọ mbikọ ma gbalịa ọkụ ndị ibe.
Ufodu ndi nkuzi ndi nuru uzo onu na onu ogugu ya nke kor'an, mee ngwa ngwa ka o gbue ya. Ma mgbe ahụ, ha niile gbachiri nkịtị ma kpaa nkata na Koran. Onye ọ bụla maara: mpụ a chọrọ ka onye ahụ mejọrọ ozugbo. Ọ dịghị onye kwuru okwu. Onye nkụzi ahụ ghọtara onwe ya, gbaba n'ime ụlọ ya, were ego ya na paspọtụ ya, nke a na-akpọ tagzi, gbaga n'ọdụ ụgbọelu wee gbapụ na ọnyà ọjọọ tupu ya emechie ya.
Ndị ikom a enweghị njikọ na ndị Kraịst. Ha ghọtara na adịghị ike nke Islam na azụ nke mba ha ma gbalịa ịgbanahụ mkpọrọ nke mmụọ ha. Ndị ọkà mmụta ọgwụ, ụmụ eze, ndị ụkọchukwu na ndị nkịtị Alakụba na-akọwapụta ihe ndị doro anya dị na kor'an ma chọọ nchọnchọ maka azịza ya na ụdị ọganihu kachasị mma nke ndụ. Anyị kwesịrị ikpe ekpere ịchọta ndị Alakụba dị otú ahụ nwere nkụda mmụọ tupu ha adaba n'aka ndị òtù okpukpe. Ikekwe ihe dịka pasent ise nke ndị Alakụba niile anaghịzi enwe afọ ojuju n'okpukpe nke aka ha, ha na-achọkwa ka mmadụ kọwaa ha.
N'elu ihe omume TV, a jụrụ otu kpakpando Muslim film nke ọ na-anọ na ya. O ji aka ya zaa, sị: "N'ebe okpukpe kachasị mma n'ụwa, Islam!" (Sura Al 'Imran 3: 19,110, al-Fath 48:28, al-Saff 61: 9, wdg).
Ọzọkwa jụrụ ma ọ kweere na ịdị adị nke Allah, ọ sịrị: "Ee e! N'ezie ọ bụghị! Okwukwe dị otú ahụ kwesịrị ekwesị maka ndị agadi tupu ha anwụọ nakwa n'ihi obere ụmụaka, ma anyị sitere n'ọgbọ nke na-eme ihe! "Onye na-akọ akụkọ ahụ nọgidere na-ajụ ya ihe ọ ga-eme ma ọ bụrụ na ndị Alakụba wakporo. Igwe ihe nkiri ahụ zara ozugbo: "Mgbe ahụ, m ga-abụ onye mbụ na-ewere Kalazhnikov ma chebe Islam." Ọ ka na-ele onwe ya anya dịka onye Alakụba ọ bụ ezie na ọ kwenyeghị na Allah dị, ọ bụghịkwa ekpere! Islam abughi nani nani ndi mmadu, kama ozo omenala, obodo na ndi mmadu.
N'oge nkwukọrịta banyere mmekọrịta dị n'etiti Islam na Christianity, nwa okorobịa Turk na-emegide onye ọkà okwu: Islam dị ezigbo mma, dị mma, ọzọ na-eme ka mmadụ dịkwuo mma karịa ihe ọ nụrụ na nkuzi ahụ. Mgbe a na-akpọ Turk na-eto eto ka ọ kọwaa echiche ya na igwe okwu n'ihu ndị na-ege ya ntị, o kwupụtara mmetụta uche iji mee ka echiche ya doo anya. N'oge na-adịghị anya, ọkà okwu ahụ chọpụtara ọdịdị ya, kwụsịrị ya ma jụọ ya, sị: "Ọ dịla mgbe ndụ gị meghere kor'an?" "Mba," ka Turk kwuru. Mgbe a jụrụ ya ugboro ole ọ na-esonye n'ekpere na ụlọ alakụba, ọ zara na ọ dịghị mgbe o kpere ekpere! Ma ọ gbachitere okpukpe ya n'ụzọ siri ike. Islam bụ karịa Qur'an na ekpere. Ọ bụ otu n'ime ndị Alakụba oge ochie ndị funahụrụ okwukwe ha - ma ka na-agbachitere Islam nke ha na-aghọtaghị.
Ọkà mmụta sayensị Bengali bụ Dr. Nasrin rịọrọ ka e nye ya ntụziaka nke nduzi nke kor'an banyere ọnọdụ nke ụmụ nwanyị na iji obi ọjọọ emeso ụmụ nwanyị nọ n'afọ iri na ụma n'alụmdi na nwunye. Ọ ghaghị ịgbaga Sweden n'ihi na ndị ikom Muslim na-ekwo ekworo maka ikike ha na - n'ihi na o jisiri ike ịjụ kor'an! Onye dọkịta a ka na-ele onwe ya anya dịka Muslim, Otú ọ dị, ọ tụfuru okwukwe sitere n'ike mmụọ nsọ nke kor'an site na ahụmahụ ya bara uru.
Ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị Islam na ndị gụsịrị akwụkwọ na mahadum bụ ndị biri ná mba ndị ọzọ na-akpatakarị Islam. Ha na-ebi ndu efu ma gbafuo okwukwe ha no na Allah. Otú ọ dị, n'ihi ezinụlọ ha, ha na-ekere òkè n'ekpere mgbe ha laghachiri n'ala ha. O doro anya na ha na-ebu ọnụ n'oge ọnwa Ramadan ma nye ụtụ isi okpukpe ha n'ụzọ nkịtị. N'ime ha, ha ewepuwo onwe ha site n'iwu nke Islam ma na-achọ ọhụụ ọhụrụ na oge ọrịrị na ọdụ ụgbọ elu. Ha kwadoro ịjụ ajụ nke ndị na-achọghị nchebe Alakụba site na izute ndị ọkà mmụta sayensị mara mma, ndị ọkachamara na ndị ọha mmadụ si n'Ebe Ọdịda Anyanwụ na n'Ebe Ọdịda Anyanwụ, ebe ọ bụ na ha ghọtara na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị a na-abụghị ndị Alakụba, kama na-ebi ndụ dị mma.
Ọnụ ọgụgụ nke ndị na-ekweghị na Chineke bụ ndị Alakụba abụghị nnukwu, ihe dị ka otu pasent, ma eleghị anya karịa na mba ndị ọchịchị na-achọta ebe dị ike. Enwere ike ịmata ha, dị ka ndị na-achọ ịchọta ndị mmadụ na Turkey, site na mwakpo ọjọọ ha na akwụkwọ akụkọ na akwụkwọ na Muhammad na Islam ya.
Ndị Alakụba na-eme ihe dị ka okpukpu abụọ na-agbasi mbọ ike na-ekweghị na Chineke. Ọ na-eme ka enweghị afọ ojuju, nkụda mmụọ na ịchọta ụzọ ndị a pụrụ ịdabere na ya. Otu n'ime ihe ndị a nwere ike ịhụ na omimi nke Islam (nke a na-akpọkarị Sufis na Tariqas) bụ ndị na-eleghara anya na ntutu isi nke ndị Islam na Muftis na ndị ọkàiwu. Ndị a na-achọ eziokwu na ihe ndị metụtara okpukpe kewapụla onwe ha site na ụlọ ọrụ ụlọ alakụba na-eme ihe na-egosi na ablutions ndị ha na-eme na igbughasị ekpere nke ekpere ekpere. Ha achọtaghị ihe ọ bụla na-emeju mkpụrụ obi ha ma ọ bụ mmụọ ha. Ha na-apụ site na ndị isi ochichi, ha na-agbakọọ aka na iwu ma gbalịa ịmepụta onwe ha na nsọpụrụ ofufe nke sitere na kor'an na akwụkwọ ndị Alakụba.
Ị nwere ike ịchọta Sufis na Tariqas ha dị iche iche na Morocco, na Sudan, na Turkey na Pakistan. Ọbụna na China na Indo nesia Islam na-ekewa n'ime ihe omimi na ngalaba nke iwu. Na Morocco, otu onye nwere ike ịhụ ili nna ọcha nke ndị a na-asọpụrụ n'ugwu dị n'akụkụ okporo ụzọ. Ụmụ nwanyị ndị na-enweghị ike ịmị ụmụ mgbe ụfọdụ na-etinye obi ha megide ili nke onye nsọ ka ha wee nwee ike ịba ụba. Na Sudan, ndi mmadu na-ama jijiji, na-egwu elu ma ghagharia n'ime uzuzu iji gosiputa nzuko ha banyere Allah na ime mmuo ha.
N'Ijipt Sufis na-anọdụ ala ma ọ bụ guzoro gburugburu ma na-akpọgharị aha Allah ma ọ bụ otu n'ime àgwà ya: "huwa, huwa, huwa ..." ọtụtụ mgbe ruo mgbe otu n'ime ha dabara na ọhụụ ma ọ bụ malite ikwu okwu n'asụsụ mba ọzọ. Na Turkey otu nwa akwụkwọ nke ndị dị otú ahụ kwuru, sị: "A na-eduzi anyị ịkpọ ndị mmụọ na ịhapụ ha mgbe ha jesịrị anyị ozi." Otu nwa agbọghọ kwuru na Setan ga-eleta ya n'ehihie ọ bụla. Ndị enyi ya gbalịrị ịgwa ya na ọ na-arọ nrọ, ma ọ kọwara na mgbe ọ dara ọrịa dịka nwatakịrị, nna ya kpọgara ya na Sufi sheikh onye gwọọ ya n'ike mmụọ. Kemgbe ahụ, nleta nke onye ọjọọ ahụ na-echegbu ya kwa izu.
Na Pakistan otu ìgwè na-eche echiche obodo. Mgbe otu n'ime ha ghọọ Onye Kraịst, nna nke con vert wetara onye ndú si ụlọ alakụba iji tọghata nwa ya furu efu laghachi Islam. Ma mgbe nwanyi a na-aguta ihe ndi mmadu na-enwe n'ebumnobi nke onye si n'ezi ofufe dapụ, nna ya mere ka onye nkuzi nke kor'an kpoo ya n'ulo n'ihi na ihe di iche iche di na ndi ezinulo ya.
N'Indonesia Hindu na ọtụtụ mmụọ ya jikọtara ya na Islam dị mgbagwoju anya n'ụzọ dị otú a na n'oge agbụrụ obodo ndị a na-eme ka mmụọ ha nwee ike ịlụ ọgụ na mbara igwe. Ejiri ígwè ígwè na eletriki eletrik na-eme ka ọ bụrụ ihe oriri. A na-anụ olu mmadụ na-abịa site na nwanyị na ntụgharị ihu.
Sufis na-agbalị ime ka Chineke nọrọ ebe obibi ha ma jupụta ọnụnọ ya. Ndị ọzọ na-agbalị ịbanye Allah n'onwe ya site na ntụgharị uche ha. Uzo nke ato na abata n'ime uwa nke ndi mo-ozi na ndi mo ojo "n'azu" Allah. A na-ejide ha n'ọtụtụ na-arịwanye elu nke anwansi.
Ebe ọ bụ na Allah na Islam dị nnọọ anya site na ihe o kere eke, ọ dịghị onye kwesịrị iche na ndị Alakụba dị nsọ na-anwa ime ka ebe dị anya site na omume okpukpe. Ọ dị mwute na mmụọ ndị mmụọ ọjọọ na-etinye n'ime nnukwu nsogbu a. Ọnụ ọgụgụ nke Sufis na Islam na-amụba. Ná mba ụfọdụ, ha na-eme pasent 10 ruo 20 nke ndị Alakụba na-ekewa n'etiti ndị dị iche iche.
Ụfọdụ ndị ọkà mmụta okpukpe Katọlik na-ekwu na Sufis ga-abụ ebe kachasị mma n'etiti Iso Ụzọ Kraịst na Islam. Otú ọ dị, ha na-eleghara eziokwu ahụ bụ na ndị na-ekpe okpukpe okpukpe kweere na ezi omume ha ma chee na ha ekwesịghị ichegharị. Nwa Ọkpara nke Chineke kpogidere n'obe bu ihe ngba ngọngọ nye ha.. Obi ebere ha kewapu ha site na nzo puta Ya, nke emechara nye ha dika anyi.
A pụrụ ịkọwa Sufis dị ka nduru n'etiti ndị Alakụba nwere nkụda mmụọ. A na-akpọ ndị na-eyi ọha egwu Muslim ndị ọrụ ha n'etiti ha. Ha na-eme mkpesa, sị: "Ekpere nile, ibu ọnụ na ịkwụ ụgwọ adịghị mma. Anyị aghaghị ime ihe n'onwe anyị. Anyị aghaghị ịchụ ndụ na ọbara anyị n'àjà iji kpochapụ ihere site na Islam ma merie ikpe na-ezighị ezi n'obodo ndị Alakụba na nanị ime ihe ike! "
Hassan al-Banna, bụ onye guzobere òtù ụmụnna Muslim, kụziri na ikpe ekpere na ibu ọnụ agaghị ezu iji bie Islam zuru ezu. O siri ọnwụ na ezi onye Alakụba kwesịrị imeri ihe ndị o mere ruo mgbe ọ dị njikere igbu ndị iro Islam. Otu narị ihe nyere n'iwu na kor'an kpọrọ ndị Alakụba itinye aka na ọgụ agha dị ka ihe akaebe nke okwukwe ha na-erube isi.
Ụmụnna Muslim, bụ ndị ọchịchị ndị Ijipt kpagburu, kpawara n'ime ihe karịrị 50 ndị na-eyi ọha egwu na-arụsi ọrụ ike ma ọ bụ ọkwa. Ayatollah Khomeini na ndi Shiite weghaara oriọna nke [Jihad] ma zipu ndi agha ya onwe ha n'ime mba di iche iche dika ndi ogbugbu, dika ndi ogbugbu n'oge ndi agha kpochapu ndi mere ka uwa mara.
Hisbollah, Hamaas, al-Djihad na ndị ọzọ na-azụ ndị na-eso ụzọ ha maka mwakpo igbu onwe ha. K'an'an na-ekwusi ike na Allah n'onwe ya ga-ede okwukwe Islam n'ime obi ha nakwa na Allah ga-ewusi ha ike maka ọrụ ndị dị otú ahụ na mmụọ nke onwe ya (Sura al-Mujadila 58:22). Nke a bụ nanị amaokwu dị na kor'an nke na-ekwu maka mmekọrịta dị n'etiti ndị Alakụba na mmụọ nke Allah! E kwere nkwa na ndị Martyrs n'Agha Nsọ ahụ bụ ebe mara mma na paradaịs (Sura al-Baqara 2: 154, Al'rran 3: 157-158,161-171,193-195; al-Nisa 4:74; Muhammad 47: 4-6;) . Ọ ga-abụ ihe na-ekwesịghị ekwesị ịkpọ ndị agha ndị a, ndị na-anwụ n'ime ndị na-egbu onwe ha, ndị na-eyi ọha egwu, mere ka ha hụ onwe ha dịka ndị mgbapụta na-achụ ndụ ha maka mmeri nke Islam. A gwara ha na ọ bụghị ha na-egbu ndị iro Islam, mana Allah n'onwe ya. Ọ ga-agbapụ agbapụ ha iji kpochapụ ndị iro nke Islam (Sura al-Anfal 8:17).
Ụfọdụ ndị nta akụkọ na ndị mmadụ na-akpọ ndị a fanatics a ma ọ bụ ìgwè nke ndị extremists furu efu na Islam. Ha ezighi ezi! N'ihi na ndị a na-agbara mgbapụta bụ nanị ndị na-emezu iwu nke Allah n'ụzọ nkịtị ma na-eme ihe ndị Allah nyere n'iwu ma ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọ bụla (Sura al-Baqara 2: 191-193, al-Anfal 8:39, al-Tawba 9:11; ). Ndị Alakụba na-ahụ maka ndị mmadụ na ndị obiọma na-akpọ ndị Alakụba na ndị na-agbagha site na kor'an. Udo na ndi na-abụghị ndi Alakụba na-ada mbà, ma ọ bụghị ma ọ bụrụ na ha enweghị ego na ngwá agha maọbụ ọ bụrụ na ọnọdụ adịghị mma.
Ihe mere n'ime afọ 50 gara aga na na gburugburu Israel na agha na-adịghị mma nke ndị Alakụba nwere ike ijupụta akwụkwọ. Atụmatụ ụgbọ elu, bọmbụ na hotels, tankị ndị na-egbu onwe ha na egwu egwu na-adịgide adịgide na agha nke irighiri akwara bụ akụkụ nke usoro ahụ.
Mgbe e gburu ndị njem nleta ndị Switzerland, ha gbakọrọ aka na ndị inyom ha n'ike n'ike n'akụkụ olulu ndị eze na Luxor ndị ga-agbapụta ụta tie mkpu, sị: "Allahu akbar!" (Allah dị ukwuu!). A na-anụ otu olu ahụ n'Andonesia mgbe ìgwè mmadụ gbakọtara ọkụ ọkụ na chọọchị ma gbaa ụmụ nwanyị China aka. Na ala nke Mindanao nke dị na Philippines, ihe karịrị 50,000 ndị Chris gburu n'oge agha ntọhapụ nke ndị gbapụtara Muslim na ebe ahụ kemgbe Agha Ụwa nke Abụọ. Ọnụ ọgụgụ ahụ ma ọ bụ karịa ndị ọzọ aghaghị ịnwụ n'ebe ugwu Nigeria, n'ihi na ndị Kraịst achọghị njikere ido onwe ha n'okpuru iwu islam, bụ Shari'a.
Na Federal Republic of Germany 32,000 ndị na-eche banyere Islam na-achọta ebe mgbaba n'ihi na ọtụtụ n'ime ha chọrọ site n'aka ndị Alakụba na-emesapụ aka ha. Ha na-enyocha onyunyo nke German mgbe niile. Mgbuchapụ, dịka nke ahụ mere n'egwuregwu Olympic 1972 na Munich, dị mfe n'oge ọ bụla. Na kor'an Allah na - agba ndị niile kwere ekwe ume ịlụ ọgụ ma gbuo ndị iro nke Islam (Sura al-Baara 2: 191-193, al-Nisa 4: 89,91, al-Anfal 8:39; al-Tawba 9: 5 wdg). Ndị Juu na Ndị Kraịst kwesịrị ịlụ ọgụ dị ka Sura nke Taịbaa (Sura al-Tawba 9: 28-29), n'ihi na ha ekweghị na ezi Chineke ahụ, esola Shari'a ma bụrụ okpukpe na-ezighị ezi! Islam, dị ka kor'an si kwuo, bụ mmụọ na-ebibi ihe.
Onye obula nke choro inye ozioma nke Kraist nye ndi Alakpere kwesiri imeri echiche ahu na ndi Alakra nile kwere na iche echiche! Onye ọ bụla chọrọ ijere ha ozi ga-ege ntị ma jụọ ha ebe ha ga-esi na ihe ha chere banyere ndị uwe ojii, okpukpe na ọdịnihu ha.
Onye n'enweghi amamihe na mkparịta ụka ndị dị otú ahụ kwesịrị ịjụ Jizọs maka nduzi Ya iji chọta ndị Alakụba ahụ bụ ndị Mmụọ Nsọ kwadebere n'obi ha. Ịhụnanya kwesiri ntukwasi obi na-ejikwa asụsụ kachasị mma nke mmadụ niile na-aghọta. Onye na-enyere ụmụ amaala mba ọzọ aka idozi nsogbu ha na ndị ọchịchị ga-eduzi ha ka ha kwanyere Ndị Kraịst ùgwù ma ghọta ha.
Anyị ekwesịghị ịtụ egwu mmụọ nke Islam, n'ihi na ngọzi nke Jizọs Kraịst siri ike karịa nkọcha Muham mad. "Ọ dị ukwuu, nke dị nime gị, karịa onye nọ n'ụwa." (1 Jọn 4:14) Anyị ekwesịghịkwa ịsụ ngọngọ na akwadoghi okwu na ndị Alakụba ma kwadebe onwe anyị. Òtù dị iche iche dị iche iche dị njikere ịkwado ndị njikere ije ozi a na akwụkwọ na nkuzi ọzụzụ.
Ị nwere ike ịchọta azịza ndị na-enye aka maka ụdị mus dị iche iche nke Mus na Agba Ochie, n'Agba Ọhụụ, na isi akwụkwọ, na kor'an na ahụmahụ nke gị. Onyenwe anyi nwere ike meghere onu ogugu Muslim ma nye gi okwu kwesiri ekwuru maka otu onye n'oge kwesiri ya site na ndu nke Mo Nso.
2.16 -- N N Y O C H A
Ọ bụrụ na ị mụọ akwụkwọ a jiri nlezianya, ị nwere ike ịza ajụjụ ndị a. Onye na-aza pasent 90 nke ajụjụ nile n'akwụkwọ nta asatọ nke usoro isiokwu a n'ụzọ ziri ezi, nwere ike inweta akwụkwọ akaebe si n'etiti anyị dịka agbamume maka ọrụ ọ ga-arụ n'ọdịnihu maka Kraịst.
na ụzọ aka maka eduzi mkparịta ụka n'etiti ndị Alakụba banyere Jizọs Kraịst
Olee ndị bụ isi okpukpe atọ bụ ndị kwusara ma kwalite ibilite Islam?
Olee otú mmekọrịta dị n'etiti ndị Juu na ndị Kraịst nọ n'ógbè Arabian Peninsula, karịsịa na Yemen?
Gini ka okwu ndi Kesin "ndi madu dere" bu maka Muhammad?
Ole ndị ka Muhammad chere na ha abụrụ onye mbụ Muslim?
Gini mere Muhammad ji lee Mozis anya maob ghi Kraist di nwayo, Nwa nke Meri, dika ihe nlereanya ya?
Gịnị mere Muhammad ji kwuo na ndị Juu bụ ndị iro kachasị ize ndụ nke ndị Alakụba? Olee otú o si merie ha?
Ole nke n'ime ụka atọ dị na mba ụwa nwere mmetụta kachasị ike banyere ọdịdị nke Islam?
Olee onyinyo nke Chọọchị Ọtọdọks na-etinye n'uche ndị Alakụba na n'ihi gịnị ka a pụrụ iji kpọọ ya "Chọọchị na-ata ahụhụ maka afọ 1370"?
N'ihi gịnị ka ọtụtụ ndị Alakụba ji chee na Chọọchị Katọlik bụ Chọọchị na-alụ ọgụ? Kedu ka ị ga-esi kọwaa nke a site na mgbanakaghachi na ihe mere eme?
Gini mere ndi nzuko ndi Protestant enwegh ihe obula n'emebe Islam? Gịnị mere ndị Alakụba ji ele anya na Ndị Kraịst na-ezisa ozi ọma?
Ugboro ole ka ndi Kristain onwe ha di n 'uwa taa, oleekwa ihe jikọrọ ha nile?
Gini bu ihe di iche iche nebe ndi Kristain si Islam?
Ole ndị bụ Sunnites na ole pasent ndị Alakụba na-agbaso iyi a nke Islam?
Ole ndị bụ ndị Shiite na ndị ole na ole na-agbaso ozizi ha?
Olee mgbe mgbasa ozi nke atọ nke Muslim malitere? Kedu ihe bụ ike ụgbọ ala ya na ihe mgbaru ọsọ ya?
Gini mere ndi obula ndi di iche iche si di iche na ndi ozo? Kedu ka anyị ga-esi ghọta ụfọdụ mmetụta, echiche, nkwenkwe na omume ha?
Gịnị bụ àgwà pụrụ iche nke ndị Alakụba na-atụgharị uche na ndị na-eme ihe ike na-efu na ego ole ndị Alakụba niile na-agbaso ụkpụrụ ha?
Olee otú anyị ga-esi abịaru Muslim ndị nkenke na ihe mere?
Ole ndị Alakụba na-emesapụ aka na ụdị ụdị ndụ ha na-eso?
Gịnị kpatara esemokwu siri ike na ọbụna agha obodo bụ n'etiti ndị isi okpukpe na ndị ọchịchị Islam ji obi ụtọ?
Gịnị ka ndị ohu Onyenwe anyị ga-ekpebi ma ha maara na ọkara nke ndị Alakụba niile bụ ụmụ nwanyị? Ònye nwere ike iru ha?
Olee nsogbu ndị inyom na-eche na Islam?
Ihe ịma aka dị aṅaa ka ohu nke Onyenwe anyị ga-eche ihu mgbe ọ chọpụtara na ọkara nke ndị Alakụba nile dị n'okpuru afọ 18 na ụfọdụ mba ndị Alakụba ọbụna n'okpuru afọ 16?
Olee otu anyi ga esi ruo ndi na-eto eto na ndi okenye n'uwa islam?
Gini bu ihe di mkpa n'eziokwu na pasent ise nke ndi Alakụba nile na-agbagha site n'okwukwe ha? Kedu ihe bụ isi kpatara obi nkoropụ ha? Kedu ka anyị ga-esi chọta ha?
Gini mere ndi mmadu ji buru ndi ekweghi na Chineke ma we chee onwe ha ndi Alakpere? Islam ọ bụghị naanị okpukpe?
Gịnị bụ ihe mere pasent 10 ruo 20 nke nkwanye Mus niile ji ghọọ Mystics? Kedu ka ha si dị iche na ndị Alakụba ọzọ? Kedu ihe ha na-agbalị ime?
Olee àgwà ọma na ihe ndị dị mma nke omimi na Islam? Gịnị na-egbochi ha ịnakwere Kraịst dịka onye nzọpụta ha?
Ntak emi Muslim-eyi ọha egwu na-akpọ onwe ha "Ndị Mgbapụta"? Kedu ka ha ga - esi kwuo na ọ bụ ha bụ ndị Alakụba kwesịrị ntụkwasị obi n'ezie?
Gịnị ka "ndị mgbapụta" dị otú ahụ na-atụ anya ma ọ bụrụ na ha anwụọ n'ịwakpo ịchụ onwe onye n'àjà ma ọ bụ ọgụ?
Gịnị bụ izugbe nke akwụkwọ nta a?
Gịnị mere na anyị ekwesịghị ịtụ egwu ịbịakwute ndị Alakụba?
Olee ndị isi ise nke anyị ga - esi enweta enyemaka maka azịza anyị na ndị Alakụba?
A na - enye onye ọ bụla nọ na ajụjụ a ohere iji akwụkwọ ọ bụla na - agwa ya onye ọ bụla amaara ya mgbe ọ na - aza ajụjụ ndị a. Anyị na-echere azịza gị ndị e dere ede tinyere adreesị zuru ezu gị na akwụkwọ ma ọ bụ na e-mail gị. Anyị na-ekpe ekpere maka gị Jizọs, Onyenwe anyị dị ndụ, na Ọ ga-akpọ, zipụ, duzie, wusie ike, chebe ma binyere gị ụbọchị niile nke ndụ gị!
Page last modified on March 23, 2020, at 11:39 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)